Izahay dia manome anao lalao sy fampiharana mahaliana ho an'ny Apple TV vaovao. Vaovao IPhone
Eto ny Apple TV, ary misy lisitra lohateny mahagaga sy mampitolagaga azo lalaovina ao amin'ny televizionantsika, mihoatra ireo izay naseho tamin'ny andro Keynote, azo antoka fa tsy nampoizintsika ny Apple TV hanana ity fandraisana feno habibiana ataon'ny mpandraharaha ity, fa inona kosa mazava fa io dia fitaovana iray izay hiteraka fanantenana betsaka ary efa nisy izany. Ny fahafaha-manao azy dia saika tsy misy farany, miaraka amin'ny fitaovana matanjaka sy ny App Store azy manokana, ny Apple TV taranaka fahefatra dia mety ho lasa mpivarotra be indrindra amin'ny rehetra, ary tsy misy tsy fahitana ady hevitra amin'izany. Izahay dia mitondra lisitra anao miaraka amin'ny lalao sasany hahafahanao mampiasa azy hatramin'ny voalohany.
5 Alto's Adventure
6 Fanjakazakana ady: evolisiona
7 Beat sports
Iza no tsy mahalala an'ity rindranasa malaza ity amin'izao fotoana izao? Tompon'ny Twitter Inc ny Periscope ary mamela antsika hahita ny fandaharana mivantana rehetra ataon'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao. Periscope dia natao ho hita amin'ny efijery lehibe Ary tonga ny fotoana, sintomy maimaimpoana ny fampiharana anao ho an'ny Apple TV, aza miandry intsony hanararaotana ny fahafahany miala voly.
Ity dia iray amin'ireo rindranasa namboarin'ny sy ho an'ny Apple TV, miaraka amina interface tsara dia tsara, manampy anao hanatsara ny fahasalamanao ny fampiharana noho ny fanazaran-tena isan'andro azonao atao eo alohan'ny TV. Izy io dia mitazona ny firaketana ny asanay ary mamela antsika hametra ny fetran'ny fampiofanana manokana, tsy isalasalana fa tonga ny fotoana hampiala ny ampondranao hiala amin'ny seza.
Karaoke tsy ho very, Tsia ?. Miaraka amin'ity rindranasa Smule ity dia afaka mankafizintsika eo alohan'ny Apple TV isika ary noho ny fifehezana ireo zava-kendren'ny fotoana, mihira irery na miaraka amin'ny orinasa, manohitra ny olona manerantany, na dia mijery azy ireo mihira aza. Fotoana mety hampiarahana ny tadim-peonao amin'ny Hira! Hampiasainay ho toy ny mikrô ny iPhone.
Netflix dia tsy afaka nanadino ny fahatongavany vao haingana tany Espana, fotoana tsara izao ahazoana tombony betsaka amin'ny playback 1080p sy ny lohateny tsy manam-petra. Tompokolahy Halloween, Fotoana mety indrindra hankafizana ny zoma faha-13, Ny fandripahana any Texas Chainsaw, nofy ratsy amin'ny arabe Elm na 28 andro atsy aoriana. Inona no atahoranao? Izany no atao hoe Halloween, kitiho ny Netflix amin'ny Apple TV vaovao, miaraka amin'ny popcorn anao sy amin'ny sofa ao an-trano.
Ity lalao ity mifototra kely amin'ny snowboarding dia mamela antsika hilalao amin'ny habe mahatalanjona ary hanao ny tsara indrindra amin'ny famahana azy tsara. Miaraka amin'ny fifehezana Apple TV dia lasa mahafinaritra kokoa ny zava-drehetra, tsy hamitaka anao izahay. Ho azonao atao ny mankasitraka ny antsipiriany mahafinaritra sy ny kalitaon'ny feo lehibe, mandrakotra anao amin'ny atmosfera mahafinaritra. Tadidio fa fampiharana maimaim-poana izy io, koa raha nividy azy ianao dia tsy mila mampidina azy io fotsiny amin'ny Apple TV App Store.
Fanjakazakana ady: evolisiona
Sambo futuristic, TV lehibe, lavitra ny Apple TV, inona koa no ilainao? Kapohy izany !. Azo alaina maimaimpoana koa, ovao ny fiara ary ampitao hamaky ny tanàna futuristic sy ny tontolon'ny mahafinaritra. Izy io dia manana iraka mihoatra ny zato amin'ny maody isam-batan'olona, ​​ankoatry ny maody marobe ahafahanao manorotoro ny namanao ao an-trano. Izy io dia fampiharana manerantany ihany koa.
Hockey, tenisy, golf, basebal ... Inona no tianao hilalao?. Fotoana tokony hifindrana ary hanaovana fipoahana milalao ny fanatanjahantena ankafizinao amin'ny fomba mavitrika indrindra amin'ny Beat Sports, amin'ny endrika Wii Sports madio indrindra, fantatsika izany. Hanana fipoahana ianao, fotoana tsara izao hihaikana ny namanao ary hihomehezana amin'ny sarimiaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izahay dia manome anao lalao mahaliana ho an'ny Apple TV vaovao
Rahalahy, fitantarana misy zanakalahy roa. Famerenana lalao momba ny fahaverezana
Ity no fisokafan'ny Apple Store any Dubai [video]